China KZ Series Petrochemical Process Pump Pump mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Ity pompa andiany ity dia mety hampindrana ranon-tsiro madio na maivana maloto na maivana kely tsy misy fitrandrahana mivaingana. Ity pump pump ity dia tena ampiasaina amin'ny fanadiovana solika, indostrian'ny solika, ny indostrian'ny simika, ny fanamboarana arintany, ny indostrian'ny taratasy, ny indostrian'ny ranomasina, ny indostrian'ny herinaratra, ny sakafo ary ny sisa.
API610 th8 / th9 / th10 / th11 fenitra endrika endrika.
hery Q = 0.5 ~ 3000m3 / h
Loha H = 4 ~ 230m
Ny tsindryram-piasana (p): ny sanda ambony indrindra dia 7.5MPa.
Ny fiasan'ny asa (t): -45 ~ + 400
Ity pompa andiany ity dia mety hampindrana madio na tsy madio sy maloto ranon-tsolika tsy misy singa matevina. Ity pump pump ity dia matetika amin'ny famolavolana menaka, indostrian'ny petrokimia, indostrian'ny simika, famokarana arintany, indostria taratasy, indostrian'ny ranomasina, indostrian'ny herinaratra, sakafo, farmasia, fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa.
Ny fantsom-pivarotan-tsolika KZA dia mifanaraka amin'ny fenitra AOI610 ka misy endri-javatra sasany eto ambany:
1) Azo antoka ny rafi-pompa ary azo antoka fa ny fampiasa amin'ny pump dia maharitra.
2) Ny fahombiazan'ny pump amin'ny salanisa dia avo miaraka amin'ny fikajiana angovo angovo.
3) Tsara ny fampandehanana ny pump pumpitation ary tsara lavitra noho ny vokatra mitovy. Ny lanjan'ny vatosoa farany ambany dia mety ho 0.5m amin'ny vokatra maro, mandritra izany fotoana izany, ny sandan'ny NPSHr amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 1m. Ny NPSHr ambany dia midika fametrahana paompy ambany ambany ka ny paompy KZA dia midika fa tsy dia lafo ny fananganana.
4) Ny habetsaky ny fampisehoana pump dia malalaka ary ny fatrany avo dia mety ho 3000m3 / h ary ny loha indrindra dia mety ho 230m, mandritra izany fotoana izany, mihidy ny famoahana pump sy làlan-doha mba ahafahana misafidy paompy.
5) Misy endrika telo mitondra fihenan-drivotra, ny fangatsiam-rivotra, ny fikatsahana ny mpankafy ary ny mari-pana amin'ny rano araka ny mari-pana fiasana miasa. Ny mpangataka ny mpankafy indrindra dia mety amin'ny faritra tsy fisian'ny rano madio.
6) avo lenta ny fanamafisana sy ny oniversite. Ankoatry ny singa mahazatra mahazatra, dia azo ovaina ireo mpanondrana entana sy ny vatana mitondra ny KZA sy ny KZE.
7) Ny fitaovana mando paompy voafantina avy amin'ny fenitra API araka ny toeran'ny asa na ny mpanjifa.
8) Ny mpanam-bidy misokatra ihany koa dia natao ho an'ity pump pump ity ho an'ny sehatry ny asa isan-karazany.
Nahazo mari-pahaizana momba ny kalitao momba ny kalitao ISO9001.Ny orinasa dia manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra mandritra ny famolavolana sy famolavolana paompy, mba hahazoana antoka ny kalitao.
Lisitry ny fampisehoana: Capacity Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, Loha H = 4 ~ 230m
Ny tsindry asa (p): mety misy 2,5MPa (mifandraika amin'ny mari-pahaizana sy ny mari-pahaizana miasa, aseho an-tsary PT)
Mari-pana asa (t): -45 ~ + 180
Hafainganam-pandeha mahazatra (n): 2950r / min ary 1475r / min
Ity pompa andiany ity dia mety hampindrana ranon-tsiro madio na maivana maloto na maivana kely tsy misy fitrandrahana mivaingana. Ity pump pump ity dia tena ampiasaina amin'ny fanadiovana solika, indostrian'ny solika, indostrian'ny simika, fanodinana arina, indostrian'ny taratasy, indostrian'ny ranomasina, indostrian'ny herinaratra, sakafo, farmasia, fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa.
KZE, pump pie sentimentugal KZEF Petrochemcial dia asiana manufografia mifanaraka amin'ny API610 ka misy ny sasany amin'ireto:
Lisitry ny fampisehoana: Fahaiza-manao Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, Loha H = 4 ~ 230m
Ny tsindry asa (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (mifandraika amin'ny mari-pahaizana sy ny mari-pahaizana miasa, aseho toy ny diagram PT)
Previous: Pumps Vertical turbine Vertical Vertical
Manaraka: KCZ Series Chemical Industry Process Pump Pump
PG pump / KGDS Series Vertical Pump Pink
KQA Series Multistage pump miaraka amin'ny Axial Spasing Casing
KCZ Series Chemical Industry Process Pump Pump
PD / KTD Series Series Pump maro karazana